Socdaalka Mareykanka: Iska ilaali dib u dhaca aan loo baahnayn ee Soo kabashada Dhaqaalaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Socdaalka Mareykanka: Iska ilaali dib u dhaca aan loo baahnayn ee Soo kabashada Dhaqaalaha
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Tilmaamaha la cusbooneysiiyay ee CDC waxay u tahay weji kale oo Mareykan ah oo ku wajahan masiibada.
U hoggaansanaanta tilmaamaha CDC waxay u oggolaanaysaa dadka Mareykanka inay si ammaan ah u sii wataan ku noqoshada nolosheenna xirfadeed.
Kuwa abaabulaya oo socodsiinaya PME -yada waxay qaadeen talaabooyin waaweyn si loo hubiyo in dhacdooyinkani ay si nabad ah u dhacayaan.
Qodobka ugu muhiimsan ee caafimaadka lagu ilaalinayo waa tallaalka.
Ururka Socdaalka Mareykanka Madaxweynaha iyo agaasimaha guud Roger Dow ayaa soo saaray bayaankan soo socda ee ku saabsan tilmaamaha CDC ee la cusbooneysiiyay shalay:
Sida uu xusay Madaxweyne Biden, tilmaamaha la cusboonaysiiyay ee ka yimid CDC ayaa u ah weji kale oo Mareykanku u maro safka faafa.
“Bilowgii, waxaan nidhi warshadeenu waxay raaci doontaa tilmaamaha mas'uuliyiinta caafimaadka dadweynaha. Waxa ugu dambeeya ee aan rabno waa dib -u -dhac ku yimid soo -kabashada curdinka ah ee safarka, gaar ahaan marka socdaalka ganacsigu si tartiib tartiib ah u bilaabo dib -u -dhiska. U hoggaansanaanta tilmaamaha CDC waxay u oggolaanaysaa dadka Mareykanka inay si ammaan ah u sii wataan ku noqoshada nolosheenna xirfadeed, oo ay ku jiraan shirarka shaqsiyeed iyo safarka ganacsiga. Tilmaanta la cusbooneysiiyay ee CDC waa inaysan carqaladeyn horumarka uu dalkeennu sameeyay bilihii la soo dhaafay maaddaama aan bilownay safar iyo in aan si shakhsi ah isugu nimaadno
“Hormuudka saynisyahanno daryeel caafimaad oo ka tirsan Jaamacadda Gobolka Ohio ayaa bishii Juun qeexay dhowr talooyin oo ku saleysan caddeyn si loo hubiyo in si ammaan ah loogu laabto shirar xirfadeed iyo dhacdooyin shaqsiyeed (PMEs). Qorayaashu waxay xusayaan sida PME -yadu uga duwan yihiin shirarka kale ee waawayn inay bixiyaan awood yareyn xoog leh iyada oo loo marayo heerar tallaabooyin badbaado oo la isku halleyn karo, oo ay ku jiraan tallaal iyo maaskaro xidhasho, deegaan la kontoroolo. Xaqiiqdii, marka loo eego qaabaynta sayniska ee Bandhigyada iyo Shirarka Isbahaysiga iyo Epistemix, PME-ga shaqsi ahaan wuxuu u horseedaa eber u dhow (0.001%) gudbinta COVID-19 ee ka-qaybgalayaasha-xitaa dhacdooyinka waaweyn.
“Iyo sida dhowaan lagu soo wariyay Los Angeles Times, kuwa abaabulaya oo socodsiinaya PME -yada waxay qaadeen talaabooyin waaweyn si loo hubiyo in dhacdooyinkani ay si nabad ah u dhacayaan.
“Laakiin qodobka ugu muhiimsan ee caafimaadka lagu ilaalinayo waa tallaalka. Waxaan si aad ah ugu dhiirigelineynaa dhammaan dadka Mareykanka inay is ilaaliyaan naftooda iyo kuwa ay jecel yihiin iyagoo is tallaala. Waa dariiqa ugu dhaqsaha badan ee caadi u ah dhammaan. ”